1 Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Nkwụsị Nke Iri na Abụọ.
2 NKWỤSỊ NKE IRI NA ABỤỌ
Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Nkwụsị Nke Iri na Abụọ.
NKWỤSỊ NKE IRI NA ABỤỌ
Jesu Anwụọ n’elu obe
Jesu nọ n’ụdị Chukwu, mana o jighị aka abụọ ghado ụdị Chukwu ya; kama ọ bịara hụchaa onwe ya were ụdị nwaodibo, a mụọ ya ka mmadụ. Mgbe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ. O budara onwe ya ala huwe isi ruo n’ọnwụ, bụrụgodu ọnwụ n’elu obe. Ya mere Chukwu bulie ya elu, nye ya aha ka aha niile, nke na-akpọọ aha Jesu, onye ọ bụla nọ n’eligwe ma ọ bụ uwa ma ọ bụ n’okpuru ụwa ga-egbu ikpere n’ala kwupụta na Jesu bụ Dinwenụ. (Filipaị 2:6-11)
Onye ga-ekewapụ anyị n’ịhụnanya Kristi? Ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ ahụhụ, ka ọ bụ mmegbu, ka ọ bụ oke agụụ, ka ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ize ndọ ka ọ bụ mmagha? Oolo! N’ihe niile ndị a, anyị karịrị dikeọgụ n’ime onye ahụ hụrụ anyị n’anya.
Onyenwe m, nyenụ m amara gị ka m were ike m niile na-arụ ọrụ ọma gị mgbe niile n’atụghị egwu ọ bụla.
Kulitenụ: kwere ukwe a gaa na nkwụsị nke iri na ato.
Ukwe: Ọ gịnị gbapụtara ụnụ?
ọ bụghị ọla ọcha na ọla edo
Ma ọ bụ ọbara Kristi (1 Pịta 1:17-19).
Nkwụsị nke Iri na Otu: A Kpodo Jesu n’obe
Nkwụsị nke Iri na Atọ: E butuo Ahu Jesu n’obe